UMHLA WOKUKHUTSHWA KOLOLIWE OPHANTSI KOMHLABA, IAMAZON PRIME | ISAMENTE, ITREYILA, IYELENQE- IRADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Umhla wokukhutshwa kukaloliwe ongaphantsi komhlaba: isamente, inqwelwana erhuqwayo kunye neqonga lomdlalo weAmazon
Ukulandela impumelelo ye-Outlander kunye ne-Omens elungileyo, ibingumbandela wexesha ngaphambi kokuba iVidiyo eNkulumbuso yeAmazon ithathe inoveli yayo elandelayo ukuze ivumelane.
Incwadi yokuphumelela kukaPolitzer kaColson Whitehead Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba lolungelelwaniso lwamva nje olusiza kwinkonzo yokusasaza, kunye noBarry Jenkins. Nayiphi na iprojekthi yeJenkins ilindelwe kakhulu kwezi ntsuku, njengoko ophumeleleyo kwiBhaso leZiko lobuchwephesha bubuchwephesha ngasemva kokukhanya kwenyanga kunye Ukuba iBeale Street Inokuthetha.
Ngoku iJenkins ijongana nenoveli yembali yeWhitehead ka-2016, ethi ijonge kuthungelwano lwezindlu ezikhuselekileyo, ngamakhoboka abaleke emantla ayebaleka ngenkulungwane ye-19, ngendlela eyiyo yoololiwe.
Nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga neAmazon's Underground Railroad.
Iza kukhutshwa nini i-Underground Railroad eAmazon?
IAmazon iqinisekisile ukuba uLoliwe ongaphantsi komhlaba uya kukhutshwa nge-14th ka-Meyi 2021 kwi-Amazon Prime Video. Kukho iziqendu ezili-10 zokungena.
Usuku lwe-116 lwe-116 lugqityiwe. Ekugqibeleni, oko kukusonga pic.twitter.com/l6KGYKAH8X
-Barry Jenkins (@BarryJenkins) NgoSeptemba 22, 2020
Ngantoni ujantshi ongaphantsi komhlaba?
Ibekwe kwinkulungwane ye-19, enye inoveli yembali ilandela amakhoboka amabini asebenza kuMazantsi eSouth - uCora, umfazi omnyama omnyama olikhoboka kumasimi omqhaphu eGeorgia, kunye noKesare osandul 'ukufika.
UKesare wazisa uCora kuLoliwe oPhantsi komhlaba. Kwimbali yobomi bokwenyani, le yayiyindlela yezindlu ezikhuselekileyo kunye nabantu abanokunceda ukukhokela amakhoboka kukhuseleko. Kolu ngcelele, oku kuyinyani njengenkqubo yezothutho yokwenyani, eneengoma, iitonela, abaqhubi kunye neenjineli- kwaye isibini siyisebenzisa ukubaleka isityalo. Ukuphuma kwabo ngenkalipho kuyababona bekrola umhlaba waseMelika befuna inkululeko kwaye, ekugqibeleni, likhaya.
Kudliwanondlebe kunye Idolophu kunye nelizwe Kwinyanga ephelileyo, umlawuli uBarry Jenkins wathi unxulumene kakhulu nomlingiswa kaCora.
Exelela iphephancwadi ukuba uCora ndim, uJenkins wachaza ukuba uhambo lweli bhinqa liselula luziva lufanelekile kwimizabalazo awayifumanayo kubudlelwane bakhe nonina, owayelikhoboka leziyobisi kwaye engazange akhe aphile.
Ndikhumbula ukufika esiphelweni sencwadi kwaye ekugqibeleni ndifunda ibali lika- [umama kaCora] uMabel kunye nokuqonda ukuba uCora ebekolu hambo, kwaye eqhutywa yile animus, le ntlungu, utshilo.
Intlungu ayikhange ibekwe endaweni engeyiyo, kuba wayelungile ukuba azive elahliwe, kodwa ukushiywa kwabangelwa yinto eyayingaphaya kolawulo lwabo. Kwaye ndandifana, 'Ngcwele, ndim lo.' Kulapho yonke into icofa nje.
Umlawuli ukhe wathetha ngezizathu zakhe zokutshintsha incwadi kaWhitehead njengothotho, endaweni yokuba abe ngumboniso bhanyabhanya-owawubaluleke kakhulu malunga novakalelo njengokuceba.
Kukho isizathu sokuba oku akuyona ifilimu ebonakalayo. Bendingafuni ukunyanzela abaphulaphuli babe ngamava abathinjiweyo, banokuma, badlale… ungenza nantoni na, uxelele Umhla wokugqibela .
I-Underground Railroad cast: Ngubani iinkwenkwezi?
UThuso Mbedu uzakudlala neCora. UMbedu yimbali eyaziwayo kwilizwe lakhe loMzantsi Afrika, ngelixa u-Caesar's Aaron Pierre wayekhe wavela ngaphambili eKyrpton.
Abanye abalinganiswa abavela kulungelelwaniso nguHomer (Chase W. Dillon-Iqela labafazi bokuqala), Ridgeway (Joel Edgerton) kunye noGloria Valentine (Amber Grey).
ULily Rabe (Ibali laseMelika eliManyumnyezi) uqinisekisile ukuba uzakudlala indima ephindaphindayo njengo-Ethel Wells, kunye nomyeni wakhe uMartin (uDamon Herriman), onceda amakhoboka ukuba asebenzise umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba.
UJenkins, obhale kwaye wayalela u-Oscar-ophumelele ukukhanya kwenyanga kunye noqhakamshelwano olunzulu ukuba iSitalato iBeale sinokuthetha, uqinisekisile ukuba uya kuzalathisa zonke iziqendu ezilishumi.
UBrad Pitt uphakathi kwabavelisi bolawulo, kunye noAdele Romanski (umvelisi ngokukhanya kwenyanga), uMark Ceryak (umvelisi olawulayo we-Be Be Street Street Can Talk) kunye noDede Gardner (umvelisi olawulayo we-12 Years A Slave).
Itreyila ivula ngemibongo evela kule ncwadi: 'Ere ndabona isimanga esirhabaxa sizinza emabaleni / sijikeleza ngamaphiko eengelosi, sihlaba ikhaka. Iqhotyoshelweyo sele ihlasele ngaphezu kweembono ezigidi ezine kwi-YouTube.
Ukuba ujonge okungakumbi ukubukela, jonga yonke inqaku lethu leDrama, okanye ujonge eyethu Isikhokelo seTV .
iimfuno zokukhanya kwesityalo se-zebra
ngoku tv black friday deals
i-costco ithenga kakuhle
Iingcamango zebhedi yokugcina indawo
indlela yokuphaka isonka se-challah